Gịnị bụ electronic groupets? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Otu kọmputa - otu esi edozi
Otu kọmputa - otu esi edozi
Gịnị bụ electronic groupets?
AnkọmputaUsoro ngbanwe gia bu uzo eji agbanwe igwe, nke n’enyere ndi n’agba gi iweghari yakọmputaswitches kama iji ot njikwa levers na n'ibu Gịnị.
(intromusic siri ike) - Kedu nke dị arọ, igwe ma ọ bụ igwe eletriki? - Eeh, ọ bụrụ n’ịnọ n’ahịa maka otu otu ọhụụ, kedu nke ị ga - ahọrọ, igwe elektrọnik ma ọ bụ igwe? Ọ bụrụ na ị na-achọ mgbe ahụ ibu nwere ike ịbụ ntụle. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe niile nke Shimano, Sram na Campagnolo dị iche iche setịpụrụ na sistemụ arụmọrụ na nke elektrọnik iji hụ ihe esemokwu dị na ebe esemokwu ndị ahụ dị - ebumnuche nke isiokwu a dị mma, dịka ozi maka gị ka ị nwee ike ikpebi ụdị igwe ị ga-achọ ịnwe na igwe kwụ otu ebe. Ugbu a, otu igwe na - adịkarị mfe n'ịntanetị, mana ọ na - esitekarị na ha gụnyere obere obere iberibe dị ka eriri na batrị na mputa, yana obere gubbins niile ịchọrọ iji mee ka otu a na - arụ ọrụ.
Enwere m mmasị n'ezie ịhụ ezigbo igwe mgbe ihe ndị a niile dị. - Ee m onwe m. A nabatara ebe niile na nhọrọ kachasị mfe maka ngwa ngwa sitere na ebe a bụ; Ceram Red Mechanical, oleekwa otú ọ dịruru arọ karịa ụdị E-Tap wireless na gịnị bụ ọdịiche ndị a? Ma gịnị banyere Shimano ma ọ bụ Campagnolo? Dịka ị pụrụ ịhụ, anyị nwere nhọrọ niile maka ịtọ otu n'ihu anyị, anyị wee na-arịọ arịrịọ, gbaziri ma zuo ohi iji nweta ha - ee, anyị jisiri ike ijide ụfọdụ Shimano Ultegra ọhụrụ.
Ihe kpatara anyị ji tinye Ultegra bụ n'ihi na ọ dị karịa Dura-Ace ma ree ya. Ọzọkwa, ọdịiche dị n’etiti igwe na igwe elektrọnik dịka otu .- Ee, nke ezuru ezu nke ị nọchiri ebe a bụ n’ezie n’ịgba igwe m; ọ bụ ụdị Sram Etap nke ejiri nke ọma ugbu a.
danny macaskill igwe kwụ otu ebe
Ọ dị afọ abụọ ma yie obere obere ihe. N'ikwu okwu banyere nke a, Jon jisiri ike jiri obere aka ya abụọ dị na Campagnolo. Echere m na Olly bụ ihe si na ya pụta, ugbu a, ọ bụ ihe dị oke ọnụ akụrụ, ọ dị oke ọnụ, mana ihe na-atọ ụtọ banyere Campagnolo gr Oupsetsis na n'oge edere edemede a, ihe ndekọ akụrụngwa dị ugbu a bụ ọsọ 12, mana ụdị EPS elektrọnik. ka nwere ọsọ 11, yabụ ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ihe ọdịiche dị oke dị n'etiti usoro ọsọ ọsọ 12 na 11 - ee, enweghị ike ichere dude, ka anyị tụlee akpịrịkpa nke eziokwu. (egwu na-ada ụda) - Anyị na-amalite na Shimano Ultegra, ụfọdụ n'ime ihe ndị dị na Di2 bụ nsụgharị igwe, ha niile bụ otu.
Anyị ga-ebu ụzọ jikọta ihe ndị a, na ọkwa niile akọwapụtara na nkọwa dị n'okpuru ebe a ka ị nwee ike ịgụ site na ndị a n'oge ezumike gị. Ndị a bụ igwe anyị nke anyị dekọtara na ọ bụghị site na weebụsaịtị Shimano. - Ee, ugbu a, otu ihe ndị ahụ bụ agbụ et. cassette, brekị, eriri breeki na casing na yinye; ngụkọta nke ihe a niile bụ gram 1,706.
Gụnyere bits ndị dị iche, na-amalite site na derailleurs. Shimano mechanical derailleurs na azụ derailleurs jikọtara na-atụle 297 gram, ebe Di2 dị ntakịrị karịa na gram 368, nke ahụ bụ gram gram 71. Enwere ike ịkọwa nke a na elektrọnik, obere sava dị n'ime yana mgbakwunye agbakwunyere agbakwunyere iji mee ka ọrụ elektrọnik dị mfe - N'ụzọ na-akpali mmasị, agbanyeghị na nke a, ya na ndị na - ebugharị gia, ebe ndị na - ahụ maka igwe na - atụle gram 415 maka ụzọ
Ọ bụ ezie na ụdị Di2 bụ naanị gram 301. Ee eeh, yana nchekwa echekwara echekwa nke gram 114, dị irè maka na onye na-ebugharị Di2 gị nwere obere akụkụ na-akpụ akpụ, gram 2375 maka Di2. Ya mere, Di2 dị ntakịrị ọkụ, mana anyị ka ga-agbakwunye na igwe ọrụ ntanetị ma ọ bụ eriri ntụgharị, aka elu na obere mkpịsị aka na njedebe na nkwụsị dị ka nke ahụ.
Di2 anyị ga-enwerịrị batrị, eriri Di2, igbe ụzọ na obere ihe ndị ọzọ.- Maka ndị ọrụ igwe, chere ka obere ihe ndị ahụ tụọ gram 84. Di2 ọ bụ gram 128, nke pụtara mkpokọta ibu, Ngwa ngwa ngwa maka gram 2502 na Di2 2503 gram, otu gram ebe ahụ.
I nwere ike ikwere ya? - Ọ na-eju m anya etu nke ahụ dị, ịkwụwa aka ọtọ. - Otú ahụ ka m dịkwa - ọ tụrụ m n'anya na usoro ọgụgụ isi ọsọ ọsọ gị. - Daalụ nwoke, ndị mmadụ zoro aka na m dị ka iche echiche site n'oge ruo n'oge.
Enwere m mmasị n'ezie ịhụ na enweghị ọtụtụ ihe dị iche, mana otu ọkwa nke anyị kwesịrị ịkọ bụ na anyị jiri eriri ndị a na-egbutu. Ha batara n’ime igbe ahụ n’ihi na ọ ga-adị iche maka onye ọ bụla n’ime gị dabere na ole ị gbubiri eriri ndị ahụ. Ọ ga - abụ ihe dị iche iche iche na ibu dabere na ole ịdọputara ụdọ ahụ agaghị adị ukwuu - Ọzọkwa, ụdọ ndị a nwere ike ọ gaghị ete mmanụ ka ị nwee ike ịgbakwunye ma eleghị anya gram nke abụba.
Ejiri batrị ahụ? N'ihi na nke ahụ nwekwara mmetụta, ọ bụghị ya? (Chill music) Na Sram Ekem, dị ka na Shimano, a na-akọrọ ọtụtụ n'ime ihe ndị ahụ, dị ka ihe nkedo gị na cassette gị. Mkpokọta ibu nke a bụ naanị gram 1475 tupu ịmalite. Mgbe anyị ji ya tụnyere Shimano, cheta na ọ bụ ebe a ka anyị na-atụnyere apụl na oroma.
Sram Red bụ elu zuru oke, ebe Ultegra nwere isi mwepu, mana dịka ọ dị na mbụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ mmebi nke igwe ndị a, lee nkọwa, ọ bụrụ na anyị ewere derailleur n'ihu na n'ibu Sram Red ha bụ ọkụ ọkụ. - ha dị naanị gram 221 n'otu ụzọ na ndị eTap derailleurs dị ntakịrị karịa na nchikota, gram 182 dị arọ karịa gram 403 kwa otu. Ihe ọzọ dị arọ, nke ị ga-eburu n'uche, ga-adị ka Shimano, gụnyere batrị ndị dị na azụ derailleur ahụ. Ka anyị gaa - ee, ndị na-agbanwe agbanwe dị na Shimano ka ụdị eTap ahụ dị mfe, gram 261 na gram 302 maka nsụgharị igwe, anyị ga-agbakwunye ịdị arọ nke eriri ntụgharị na ngwugwu na akụkụ ndị ọzọ niile. 78 gram maka Sram Red, mana anyị enweghị itinye ihe ọ bụla maka eT n'ihi na ọ bụ ikuku - Ee, Olly nke ahụ pụtara na nchikota maka ụdị igwe bụ gram 2076 na eTap 2139 gram, naanị gram 63 dị arọ maka ụdị eTap nke dị egwu na-adọrọ mmasị ọ bụghị ya? - Naanị ntaramahụhụ dị oke ala na nke ọzọ, mgbakọ na mwepụ echiche gị dị ịtụnanya. - Daalụ enyi don't maghị ma m chọrọ ịlele ya na ngalaba nkọwa.
Tọmọs mehiere na nnukwu echiche ya. Gịnị mere na o jighị ihe mgbako wee tinyekwuo oge na ya? Enwere m ike ide ọrụ m mgbe Olly gasịrị. (Chill music) - Ka anyị lelee Campagnolo ugbu a, dịka anyị kwurula na anyị nwere otu nnukwu ndekọ otu egwu, elu osisi ahụ.
Anyị nwere 11-ọsọ EPS na 12-speed n'ibu. Jon Cannings achọpụtala ụdị ọsọ ọsọ 12 nke EPS, na-agagharị n'ọzara, mana n'oge a na-eme isiokwu a, erubeghị na ụlọ ahịa, yabụ anyị nwetara 11-speed EPS. - N’aka nri, ugbu a na-akụda mmụọ, mmezi nke dị na cassette pụtara na ihe niile mejupụtara otu abụọ a dị iche, ewepụ igwe na brake.
Agbanyeghị na ọ bụrụ na ị lelee anya nke ọma, akpụkpọ ụkwụ breeki nwere ike ịdị iche. Emechaa m na Sram na Shimano ma anyị atụgola ihe niile ọnụ na-abụghị azụ azụ na gia lever. N'okwu a, ọ bụrụ na ị gbakwunye ha niile, nsụgharị igwe bụ gram 1593.
Agbanyeghị, ụdị elektrọnik bụ gram 1543, na nke a maka nke mbụ nke otu anyị, enwere ihe dị iche.- Ee, mana ọ na-esiri anyị ike ịkọwa ha n'ihi na mmadụ nwere ụma ọzọ - ee, ọ bụ apụl na oroma. , ma ị ka maara. - Apụl dị oke ọnụ - Ee, apụl adịchaghị.
Otú ọ dị, dị ka ọ dị na Shimano na Sram, ndị na-agbanwegharị ọkụ na-adị mfe na ụdị nke elektrọnik, yana obere akụkụ na-agagharị na nsụgharị igwe. 279 grams kwa otu maka EPS mgbanwe levers tụnyere 342 grams maka n'ibu mgbanwe levers - Ee, na anyị na-ahụ a yiri ụkpụrụ na derailleurs, ọ bụghị anyị? Igwe arụ ọrụ na-atụle gram 268 maka ihu na azụ. Mgbe elektrọnik derailleurs dị gram 328, ma ọ bụrụ na anyị agbakwunye ya, anyị ga-enweta otu ngụkọta nke otu maka ngwa ọrụ ọsọ ọsọ 12 nke gram 2201.
ị nwere ike ịghọ onye ụtụtụ
Maka ngwa elektrọnik nke 11-speed, anyị nwetara gram 2150, yabụ na nke a, ọ dị mfe, mana anyị chọrọ ndị bekee gị, Olly, kedụ ebe ndị gị na ha nọ? - Ọ dị mma, tinyekwuuru gubbins niile, 12, ọsọ na-ezu ohi - ọ bụ eziokwu? - Ihe - Nhazi ya ka ọ dị? - Ee, gram 2299 ma e jiri ya tụnyere gram 2307 maka EPS 11 Speed. Anya mechiri? Obere dị na ya. - Ọ dị nso, ee. - Mana ihe na-atọ ụtọ enwere ihe dị na ibu nke gubbins, maka ụdị elektrọnik bụ batrị.
Sịga ahụ yiri sịga maka Campagnolo EPS dị ihe okpukpu abụọ karịa nke Shimano - ọ bụ nnukwu sịga na-adaba na ọnụahịa ya. Echere m na ọ kachasị mma ikwu ya. Ee, ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma ị toụ otu n'ime ihe ndị a.
Dị ka ọ dị na mbụ, igwe niile dị na nkọwa ahụ dị n’isiokwu a. Aghaghị m ịsị na ọ tụrụ m n'anya na obere ọdịiche dị n'etiti otu ndị a dị n'ibu. (Chill music) - Na nchịkọta, nsonaazụ na-egosi na ọ bụghị ezigbo ọnwụ maka ngwa eletrọnịkị bụ otu.
Ozugbo a tụlere akụkụ niile ọ bụ ihe nkasi obi na ntakịrị ihe ijuanya nye m - ọ bụ, m ga-atụba bọl bọọlụ - wee gaa n'ihu - yabụ ndị otu a niile nwere anyị maka mbipụta breeki rim; ọ bụrụ na ị kpachara anya lee diski breeki mbipute, obv N'okwu ndị a, ihe niile mejupụtara bụ otu, ewezuga ngwakọta breeki lever switch. N'ihe banyere Shimano Ultegra Di2 hydraulic lever nchikota nchikota bu 360 gram. Ọ bụ ezie na ụdị nke a bụ gram 554, nke a pụtara na anyị nwere nnukwu oke ibu maka ịrụ ọrụ Di2 na breeki diski hydraulic, n'ezie gram 196.
Kedu nke a na-agaghị efere. - Ee e - mba, o na - efu obere obere ihe - N’iche, nke ahụ bụ nnukwu ihe dị iche, otu kọmputa dị iche iche ka dị oke ọnụ karịa bọọdụ karịa ndị otu ha. N'iji otu elektrọnik, ị naghị akwụ ụgwọ dị ukwuu maka ibu ahụ, mana maka arụmọrụ na-agbanwe agbanwe. - Ee, na ihe banyere igwe elektrọnik na breeki hydraulic ị na-akwụkwa ụgwọ mbelata na mbelata ergonomics nke ọma.
Kedu ụgwọ ọ bụla kwesịrị ịkwụ ma ọ bụrụ na ị ga - akwụli ya, echere m na ọ dabere. Onye ọ bụla ga-enwe ọnọdụ nke ya n'otu n'otu dị ka ihe i nwere ike imeli. - Eeh, ma ị nwere ike imeli ya ma ọ bụ na ịgaghị enwe, chee na ọ bara uru, ọ dị mma, ọ bụghị anyị ka anyị kwuru, ọ bụ gị.
igwe ịgba ígwè
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ nnwale ikpuchi nke Shimano Dura Aceversus 105 anyị mere otu ma ị nwere ike pịa ebe a n'okpuru. - Ee, nnukwu nsonaazụ maka akọ na uche Rider. Ọfọn, tupu anyị agaa, ka anyị mee ngwa ngwa na n'ọtụtụ ọnọdụ anyị na-atụle ahịrịokwu dị iche iche ebe a.
Ya mere, Ultegra adịghị ka Sram Redas anyị kwuru na ya na nke Campagnolowe ọ dị mkpa iji atụnyere ọgbọ abụọ dị iche iche nke ọma otu otu, otu nwere 12 gears na otu na 11 ọsọ - anyị nwere olile anya na ị bara uru.
Kedu otu igwe elektrọnik kachasị mma?
Shimano Dura-Ace R9150Di211-Ọsọ.
Shimano Ultegra R8050Di211-Ọsọ.
Sram Red eTap AXS 12-ọsọ.
Sram Force eTap AXS 12-ọsọ.
FSA K-Force ANY..
Ngbanwe kọmputa ọ bara uru?
Kpọmkwem, 'McCarthy na-ekwu. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere mmerụ ahụ, aka merụrụ ahụ, ihe ọ bụla nwere ike ime ka o sie ike ịgba ịnyịnya ígwè,electronic ịgbanweenwere ike inyere aka. Ọ na-arụ ọrụ otu ihe ma ọ bụrụ na ị nwere aka oyi ma ọ bụ nnukwu aka. Ọ bụrụ n’ịchọghị dexterity n’ihi na ọ dị nfe.21 2020.
Kedu ihe dị mma banyere Di2?
Na ShimanoDi2ị nwere ike ịhazi ọsọ na-agbanwe na ọnụọgụ nke usoro ị ga-agbanwe mgbe ị pịa ma jide lever. I nwekwara ike gbanwee ọrụ ndị na-emegharị ihe na mbadamba, na ọbụna ọrụ nke aka ekpe na aka nri.
Di2 dị mma karịa eTAP?
Karịsịa, ndịDi2n'ihu na-agbanwe ọsọ ọsọ n'ihi na naeTapsistemụ ụbụrụ dị n'azụ mech ga-ekpebi ma ọ ga-achọpụta akara sitere na ngbanwe abụọ na ndị na-agụma ọ bụnaanị otu. Dura-Ace R9150Di2dịkwa ọbụnaỌzọcustomizablekarịaAXS, obughi ihe nihi na enwereỌzọbọtịnụ hazie.
Di2 bara uru maka ego ahụ?
Di2dịkwa mma karịa etap. Enweghị igbu oge na ngbanwe, na-arụ ọrụ zuru oke oge ọ bụla.Di2ama doro anyakwesịrịọ bụ maka m. Karịsịa ma ọ bụrụ na itinye ọtụtụ kilomita.
agba igwe kwụ otu ebe
SRAM ka mma karịa Shimano?
ShimanonaIherema na-emepụta ngwaahịa dị mma, mana ụzọ ha na ụzọ ha si dị iche. Na-ele anya na mpaghara akụrụngwa dị ugbu a, enwere ike ikwu yaShimanobụkarị ihe na-agbanwe agbanwe nke abụọ. N'ime afọ iri gara aga,Ihereagbasowo ihe ike karia ihe ndi ozo.
Di2 dị mma karịa Ultegra?
E nwere ebeUltegra Di2bụ naanịmma, na ndị ọzọ dị elu. Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, bụ eziokwu na ịgbanwee arụmọrụ na igwe kwụ otu ebe bụ n'ụzọ dị ukwuu indistinguishable si Dura-AceDi2. Nghagharị azụ na-agbanwe agbanwe ma na-enye iwu, na ntụgharị ihu na-eju anya na-abịa n'usoro igwe.
Di2 ga-aga ikuku?
Ikike nchọpụta na-atụ aro na-esote-gen Shimano Dura-AceDi2 ga-ejighi eririna 12-ọsọ. Mana ngwa patent nke ụlọ ọrụ ahụ na-enye nghọta maka ihe Shimano lebara anya, akara ahụ etinyela akwụkwọ ikike 35 US patent ruo 2020 nke gụnyere maikukunkwurịta okwu na derailleurs.
Kedu kilomita ole ka batrị Di2 na-adịgide?
The nkezi onye na-agba ga na-ana haDi2 batrịotu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n’afọ, n’ihi na ị ga-eru ihe ruru 1,500Puku kwuru pukuna otu ụgwọ. N'okwu dị nnọọ obere na abatrịnwụrụ mgbe ọ na-agba ịnyịnya,Di2nwere ụfọdụ atụmatụ e wuru iji jide n'aka na ị ga-ala n'ụlọ n'enweghị kwaukwuuna-ata ahụhụ.
Kedu otu kọntaktị eletriki ziri ezi maka?
Di2 ma ọ bụ eTap, E-tube ma ọ bụ Bluetooth, otu batrị ma ọ bụ anọ, Shimano ka ọ bụ SRAM? Otu agha dị iche iche dị ndụ na nke ọma na 2020, ma a bịa n'ịgbanwe kọmputa, ị nwere nhọrọ atọ, Shimano Di2, SRAM eTap, na Campagnolo EPS - ndị nke abụọ mejupụtara òkè ọdụm nke ahịa maka mgbanwe mgbanwe batrị. .
Kedu ihe ị ga-achọ na otu igwe eletriki?
Isi ihe ị na - achọ site na otu ọ bụla na - agbanwe ma na - agbanwe agbanwe, ọ na - esikwa ike ịsị na igwe na - enye ihe ọ bụla ọzọ karịa nke ahụ.
Kedu ụdị ụdị ụzọ igwe kwụ otu ebe?
Ọzụzụ niile sitere na Shimano, Sram na Campagnolo. Otu dị iche iche n'okporo ụzọ na-abịa site na ngwa elektrọnik ma ọ bụ na-arụ ọrụ maka ndị niile na-agba ịnyịnya, site na onye mbido ruo onye na-agba ọsọ oge. Merlin na-enye ohere iji họrọ dị iche iche akụrụngwa nkọwa na groupets, dị ka crank ogologo ma ọ bụ cassette ruru, izute onye chọrọ.